तिब्बत, 藏區 परम्परागत चिनीयाँ, ज्याङ्कू ह्यान्यू पिनयिन, हेर्नुहोस् नाम खण्ड) क्षेत्रहरू मध्य एसियाको उच्च समस्थली हो। र तिब्बती जनताको स्वदेश-घर। जसको सरदर ढाल ४,९०० मीटर १६,००० फूट नापको इकाईft), संसारकै उच्च क्षेत्रहरूमा पर्दछ र यो "विश्वको छहारी Roof of the World" नामले प्रसिद्ध छ।
शताब्दियौं सम्म बेग्लै राष्ट्रको रूपमा रहेको तिब्बत आज जनवादी गणतन्त्र चीन अन्तरगत पर्दछ। तिब्बत चिनीयाँ गणतन्त्र भएको दावी छ। यद्यपि तिब्बतीय सार्वभौमिकता विवाद,मा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकार बीच विवाद कायमै छ। निर्वासनमा रहेको तिब्बत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम तिब्बत चीनको प्रान्त भएको स्वीकार्दैन। तिब्बतीय साम्राज्य सातौँ शताब्दी तिर अस्तित्वमा आएको हो जब सम्राट स्रोङ्चन गम्पोले विभिन्न क्षेत्र जातजातिहरूलाई एकीकृत पारे। सन् १६०० को शुरू देखि नै टुल्कुका अवतारी लामाहरू, जो दलाई लामा भनेर चिनिन्छन् हरूले तिब्बतमा शासन गरिआएका थिए। तिब्बत र १४ दलाई लामाहरू eminations of अवलोकितेश्वर भएको विश्वास गरिन्छ। "चेनरेजिग" तिब्बतीमा, compassionको बोधिसत्त्व मानिन्छ।
सत्रौँ शताब्दी र १९५९ बीचमा, दलाई लामा र उनका अनुचरहरू तिब्बतका मुख्य राजनीतिक शक्ति थिए। उनीहरू अधिकांश आफ्नो धार्मिक र प्रशासकीय शासन परम्परागत राजधानी ल्हासा, बाटै चलाउँथे जुन तिब्बतको सबैभन्दा पवित्र शहर मानिन्छ। चिनीयाँ सूत्र, जियावेई, वाङ्, "चिनियाँ तिब्बतको ऐतिहासिक स्थिति", २०००, pp८९–९२ का अनुसार सत्रौँ शताब्दी देखि १७२१ सम्म, तिब्बतका राजनीतिक नेता देग्सी अथवा गभर्नर हुन्थे। १७२१ मा, चिनीयाँ सम्राटले देग्सीको पद अन्त्य गरे र राजनीतिक शक्ति चार गालोनहरूको हातमा दिए। १७५१ मा, चिनीयाँ सम्राटले दलाई लामालाई तिब्बतको आत्मिक र राजनीतिक नेताको स्थान दिए जसमा सरकार गाजाङ लगायत यसमा ४ गालोनहरू हुन्थे।
तिब्बतको निर्वासित सरकार विदेशमा रहेका तिब्बतीय शरणार्थी हरूको समाजका अनुसार तिब्बत, भन्नाले तिनीहरू ति पुरानो ठूलो प्रान्तलाई सम्झन्छन् जसमा परम्परागत प्रान्तहरू अम्दो, खाम, र उ-त्साङपर्दछन। तर यसका अतिरिक्त जनवादी गणतन्त्र चीनको प्रशासन अरूणाञ्चल प्रदेश, सिक्किम, भुटान, र लद्दाख जहाँ तिब्बती साँस्कृतिक क्रियाकलापहरू भेटिन्छन् त्यो सबैलाई तिब्बत अन्तरगत भएको दावी गर्दछ।
तिब्बतीहरू घरलाई Bod བོད་, भन्छन् जसको उच्चारण ह्लासामा pö हुन्छ। तिब्बतीहरू तिब्बतलाई पितृभूमि भन्छन्। जबकी मातृभूमि "motherland" १९६० तिर चीनमा प्रचलित भयो।
तिब्बत शब्द अरबी भाषाको शब्द Tubbat बाट आएको हो। The Classical तिब्बतीय भाषा " तिब्बत शब्द मध्यकालीन चिनीयाँ मा, 吐蕃 पिनयिन Tǔfān, often given as Tubo, त्यही टर्किस शब्दबाट आएको हो।
2.1. नाम तिब्बतीय
2.2. नाम अङ्ग्रेजीमा
तिब्बतीय भाषा सिनो-तिब्बतीय भाषा परिवारको तिब्बत बर्मेली भाषा समुहमा पर्दछ। बोलाईको तिब्बतीय भाषामा विभिन्न छिमेकी भाषाको प्रभाव देखिन्छ। अझ कहिलेकाँही अरू केही हिमाली भाषासँग यसको विभेद छुट्याउनै कठिन हुन्छ। मध्य तिब्बत ह्लासा,खाम, अम्दो आदी। राजनीतिक कारणले मात्र तिब्बती भन्दा अलग्गै भाषा भनिएका हुन् भन्न सकिन्छ। त्यसैले तिब्बतीय शैलीको भाषा तिब्बतीय उच्च समस्थलीका करिव ६० लाख मानिसले बोल्छन्। त्तियसैगरी आधुनिक तिब्बतबाट नेपाल, भारत र अरू देशमा निर्वासित २ लाख भन्दा बढी शरणार्थीहरूले पनि यही भाषा बोल्दछन्।
प्राचीनकालमा पश्चिमाहरूको लागि तिब्बत एक भौगोलिक अवधारणा मात्र थियो तर जब युरोपियनहरू एसियामा आए, तब रूसी र बि्रटिस साम्राज्यको बीचमा तिब्बतलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र अन्तर्गत समेट्न सुरु भयो।रूसी र बि्रटिसहरूबीच जासुसी र प्रतिजासुसी खेलहरू भए र अन्त्यमा बि्रटिसहरू ल्हासामा सेना राख्न सफल भए।